Kedu uru na ọghọm nke eCommerce? | ECommerce ozi ọma
Claudi ego | | Nkuzi na akuru
ECommerce bụ ụdị azụmahịa na-agbagha agbagha nke na-aga itolite n'ụzọ na-ezighi ezi. Ọ bụ usoro ire ahịa na ọ na-agbanwe maka iwu na ọnọdụ ahịa ọhụụ, nke na-enye ohere ọhụrụ. Mara ya nke ọma adịghị mfe ma ọ dị ezigbo mkpa ịmụ ahịa ka achọrọ iji ghọta ma ọ bụrụ na ngwaahịa gị zutere profaịlụ iji banye ahịa site n'ụzọ a.
Mana dị ka ihe niile, enwere akụkụ abụọ nke mkpụrụ ego ahụ, mara uru na ọghọm dị n’iji eCommerce.
1 Isi na nkwekọrịta nke ecommerce
1.1 10 Uru nke Ecommerce
1.2 10 Uzo ojoo nke Ecommerce
2 Ohere na okike
3 Ecommerce dị ka ihe dị mkpa
Isi na nkwekọrịta nke ecommerce
Tupu ịmalite, Ọ dị mma ịnweta ebumnobi na ezi uche nke ihe ọ pụtara ịrara onwe gị nye ecommerce (kọmputa commerce). Agụụ ahụ nwere ike ime ka anyị ghara ịhụ nsogbu ọ bụla nwere ike ime ka anyị ghara ịhụ ihe ọma. Maka nke a, anyị ga-elele elele 10 na ọghọm 10 nke ecommerce.
10 Uru nke Ecommerce
Enweghi oke ala, nke a bụ n'ihi na netwọkụ zuru ụwa ọnụ ka ị nwee ike ịgbasa azụmahịa gị ebe ọ bụla.
Can nwere ike igosi ma nye ọtụtụ ụdị ngwaahịa.
Ego nke mbido na ndozi dị obere karịa azụmaahịa ọdịnala ọdịnala.
Chekwa oge mgbe ị na-azụ ihe maka ndị ahịa.
Enwere udo dị ukwuu n'ịzụlite ogbe, coupon, na atụmatụ ịzụ ahịa ego.
Nwere ike ịnye ndị ahịa ozi ndị ọzọ.
Enwere ohere dị ukwuu nke inye nsachapụta nke ngwaahịa na ahịa na njirimara ha.
I nwere ike ịbụ onye isi gị.
Enweghị oge mgbochi, belụsọ na ị bụ onye na - arụ ọrụ ọfụma, ọ na - enye gị ohere ịme ka ezi ezinụlọ ka mma ma gbanwee ọrụ gị na nhazi oge na oge ndụ gị.
Nwere ike tinye dijitalụ azụmaahịa ahụ, mana ịnwere ike ịnwe 100% na ntanetị na elektrọnik, nke na-ebelata ụgwọ maka ọkwa dị ọnụ ala maka mmefu ego niile.
10 Uzo ojoo nke Ecommerce
Asọmpi a dị elu karịa na onye ọ bụla nwere ike ibupụta ụdị a
E nwere ndị na-azụ ahịa na-ahọrọ ịhụ ngwaahịa ahụ tupu ịzụta ya ma na-enyo enyo
nke ịkwụ ụgwọ n'ịntanetị.
Ọ bụghị ngwaahịa niile ka enwere ike ịre n’ onlinentanet na otu obi.
Gwọ Mbupu nwere ike ịdị oke ọnụ mgbe olu pere mpe.
Iguzosi ike n'ihe nye onye ahịa siri ike n'ihi asọmpi dịgasị iche iche.
Nchebe saịtị nwere ike inye ndị ahịa nwere ọtụtụ ajụjụ.
Ndị ahịa chọrọ ọnụahịa kachasị mma na ọrụ kachasị mma ma sie ike ịnweta
ma mgbe niile.
Ọ bụrụ na ị na-eyigharịkarị oge, ọ dị mfe ịdọpụ uche gị na ihe ndị ọzọ ma ọ bụ ọrụ ndị ọzọ, ọkachasị ma ọ bụrụ
ị nọ n'ụlọ. Eti ntụnọ edi akpan n̄kpọ.
E nwere ihe egwu dị na mwakpo phishing (izu ohi igodo na okwuntughe) na omume
Ọ bụrụ na ibe gị (ma ọ bụ ihe nkesa) gị gbadara, ị gaghị enwe ike ịnye ihe ị na-ere, na-efu
ahịa ndị ahụ.
Enweghị ndidi nke onye na-azụ ihe. Na ụlọ ahịa nkịtị, obi abụọ ọ bụla ma ọ bụ ajụjụ ọ bụla nwere ike
azịza ya ozugbo, ma ọ bụghị ihe na-emekarị n'ịntanetị.
N'otu aka ahụ, oge iji nweta ngwaahịa abụghị ngwa ngwa, yana mgbe a
onye na-na a ọsọ ọsọ, pụrụ ọbụna ikpebi ịzụta ngwaahịa ruru oge nke
Ohere na okike
Onwe ya, otu n’ime ihe dị mkpa (na rụzuru) nke ecommerce. Dị ka ọ dị na azụmaahịa anụ ahụ na nke ọdịnala, ecommerce na-enye anyị ohere itinye ihe anyị bu n'uche n'uche. Ma isi ihe mere ebe a dabeere uru nke itinye echiche bụ na ọ na-adịkarị ngwa ngwa ma dịkwa ọnụ ala. Eziokwu a dị iche iche na-enye anyị ohere "gbaa" otu echiche na-etinyeghị ihe ize ndụ mgbalị ma ọ bụ isi obodo dịka ọ nwere ike ịbụ na azụmaahịa anụ ahụ.
Ọ bụrụ na anyị emehie ihe, anyị nwere ike ịtụle ebe anyị dara, ma ọ bụ na echiche anyị abụghị ihe na-atọ ọha na eze ụtọ dịka ọ masịrị anyị. Ihe puru omume nke odida ma oburu na anyi gaa “otutu” di elu, nka bu eziokwu, mana obu kwa eziokwu na anyi nwere oganihu anyi n’enweghi anya. Na ọ dịghị ihe dị mma karịa na-aga nke ọma na ihe na-amasị gị.
Anyị nwere ike ịchọta ihe atụ nke ụdị a n'ọtụtụ ebe. Ndị mmadụ na-enwe mmasị ịga njem ma raara onwe ha nye ugbu a ịgagharị ụwa, na-ewepụta mmetụta ha na foto nke ọdịbendị ndị ọzọ na ibe ha, na-enye ndụmọdụ na ịmepụta usoro mkparịta ụka ziri ezi nke dugara n'ịkwalite ngwaahịa ndị ha na-atụghị anya ... na ihe omuma banyere ecommerce achotala ndi nwere onyinye puru iche, ma na ha enweela oganihu. O doro anya na ikpe dị ka ndị m na-akọwa ga-abata m n’isi, ọ bụkwa na mbido ha bidoro otu a. N'ihi ya, ọ dị mkpa ịbụ onwe gị na ịmepụta ihe okike.
Ecommerce dị ka ihe dị mkpa
Ga-agụbu na ọ bụghị azụmaahịa niile nwere ike ma ọ bụ mkpa inwe ọnụnọ n'ịntanetị. Ọ bụ ezie na nkwupụta a bụ eziokwu, ọ na-adịwanye mkpa ka afọ na-aga. Ọbụghị naanị digitization kamakwa mgbanwe nke ụwa na ọkwa teknụzụ na-enyere aka ma na-aga n'ihu na-aga n'ihu nke azụmahịa kọmputa. Fọdụ data dị mkpa iji ghọta mkpa uto ga-abụ ihe ndị a:
Na 2018, ecommerce na Spain nwere ndekọ ọhụrụ, nde euro 40.000.
Onu ogugu ndi mmadu na-eme na ntaneti na-abawanye site na 20%.
Ọtụtụ ọgbọ na-eji ịntanetị ọ bụghị naanị ịzụta ngwaahịa, kamakwa iji nweta ozi, ndụmọdụ, ma ọ bụ chọta ebe azụmahịa dị. Ọbụna site na mbọhọ, tupu ihe ọ bụla mechara ọ bụla mkpa.
E wezụga ịtụle uru na ọghọm anyị nwere ike ịchọta na ecommerce, data kwa afọ na-egosipụta mgbanwe na-emekarị na oriri nke na-eguzobe onwe ya ma ọ dị ka ọ naghị agbanwe agbanwe. N'ezie, ecommerce na-eguzobe onwe ya, ngwa ngwa, kwa ụbọchị ọ na-arụ ma na-emetụ ngalaba ndị anyị na-atụghị anya ya. Dị ka a ga - asị na ọ kwụ ọtọ, a na - emepe ụwa nha anya n'ụzọ yiri ya, mana nke ọdịiche dị iche na anyị agaraghị eche tupu oge ụfọdụ. Site na ịchọta onye na oge, rue ego mebere.
Ebumnuche azụmaahịa niile nwere mmalite siri ike, ma a bịa n'ihe gbasara ụlọ ọrụ, otu a na - eme, yana ogologo oge karịa. Ọ bụ ihe nkịtị, ma ọ bụ ihe okike, ebe ọ bụ na iwebata ihe ga-agafe n'ọtụtụ ụlọ ahịa ahụ, nke ọ bụla na-aga n'ụzọ nke ya. Ecommerce abụghị ihe ọzọ, ọ bụ ezie na mgbasawanye na-adị ngwa ngwa ma e jiri ya tụnyere oge ndị ọzọ, ebe ọ bụ na ịntanetị na-akwado njikọta n'etiti ụlọ ọrụ na ndị ahịa. Iji ohere ndị a eme ihe ga-eduga anyị na ụwa nke ohere ndị a machibidoro iwu ruo ugbu a. Ma anyị ga-enwe ndidi ma na-aza ajụjụ, n'ihi na usoro na njikwa nke ụdị azụmaahịa a abụghịkwa ihe a na-ahụkarị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » CMS na Teknụzụ » Nkuzi na akuru » Kedu uru na ọghọm nke eCommerce?
Otu esi eme ka ahia site na igbanwe onyonyo a